Tinye akwụkwọ maka họtelu ndi di na Victoria Island, Lagos - Jumia Travel
Họtelu Victoria Island
Banyere Victoria Island, Lagos
Victoria Island bụ ebe azụmahịa nke ndi bara ọgaranya na obodo ihe ego na azụmahịa na isi obodo nke Lagos Steeti, Nigeria. Bu ebe amara dị ka “VI”, ahọpụtara obodo a na mbụ dị ka ebe obibi ndi ọgaranya di oké ọnụ tupu ya abụrụ otu n'ime obodo na ekwo-ekwo na Nigeria. VI bụ ebe isi ụlọ ọrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ukwu nke umu amaala Nigeira bu ndị di ka ụlọ ọrụ ekwe nti Globacom , ụlọ oba ego Zenith na otutu ndi ozo, na ụlọ ọrụ ndị mba ozo bu ndi dị ka IBM, Halliburton na Hewlett Packard .
Ogige Ebe Njem Nleta Ndi Di Na VI
Odo oke osimiri nke di na agwaetiti Victoria (Victoria Island) amama na-ewu ewu a na akpo (bar beach) na okwu beeke nwere oke ebili mmiri na ebe ngafere zuru okè bu nke nwere kwa ikuku oyi. Ịgba ịnyịnya ibụ bu ihe ọzọ a na eme na akuku odo osimiri a (beach). Azumahịa na akuku odo osimiri (Bar beach market) bụ otu n’ime ahịa ndi kasị mma maka ihe oriri ndi a na enweta na oké osimiri gba gburugburu Lagos.
Ulo Obibi Na Victoria Island
Họtelu ndi di na Victoria Island ndi dị ka Eko Họtelu & Suite na Avenue Suite na adi kari oke onu ma buru nke na-adị mfe itinye akwukwo onunu maka ha site na Jumia Travel.
Usoro Ime Njem Na Victoria Island
VI bu nke di na agwaetiti nke Lagos (Lagos Island) dị ka obodo agbata obi ndị ọzọ bu nke oke osimiri Lagos kewapuru iche na ya.
Agwaetiti nke Lagos (Lagos Island) bụ nke a na aga site n'okporo ụzọ site n’elu àkwà mmiri nke ato: Eko , inyinya igwe na àkwà mmiri nke 3 (àkwà mmiri di 11.8Km nke ewuru na afo 1990 nke bukwa àkwà mmiri kachasi ogologo na mba Afrika).
Okada na ewu ewu (ọgba tum tum azụmahịa) bụ nke a na enyeghi ike-ike irụ-orụ na VI kama Keke NAPEP (Ugboala azụmahịa nwere ukwu ato) na-arụ ọrụ ma na-ejedebe na ụfọdụ ebe. Uzo kachasị mma maka ime njem na VI bụ site na usoro ugboala Tagzi ma ọ bụ ụgbọ ala akwu ugwo ebunye.